t-mobile misoro pa & t kuti ive yechipiri pakakura isina waya inotakura mune u
Kuru Nhau & Ongororo T-Mobile inokwira pamusoro AT & T kuve yechipiri pakakura isina waya inotakura muU.S.
T-Mobile inokwira pamusoro AT & T kuve yechipiri pakakura isina waya inotakura muU.S.
Mubvunzo unokurumidza, ndeupi mutakuri weU.S. ndiye wechipiri pakukura waya asina kupihwa munyika? AT & T, handiti? ZVAKAIPA. Kutenda kune yakasimba-yakasimba yechipiri kota, T-Mobile ikozvino yave nhamba mbiri mumatunhu iine Verizon chete pamberi payo.
Munguva yekambani & apos; s yechipiri kota yakarekodha 253,000 yakabhadharwa mari yekuwedzera nefoni ye .80%.
Zvikwereti zvakabhadharwa zvakasvika 133,000 nechurn ye2.81%. Yese mambure ekuwedzera emamiriyoni e1.25 aive akanakisa muindastiri ichipa T-Mobile 98.3 mamirioni evatengi pakupera kwekarenda yechipiri kota. Ndiyo yechipiri pakukura muindasitiri. Pamusoro pegore rapfuura, huwandu hwese hwevatengi veT-Mobile yakakwira neinenge 33,000 vatengi kana 49%.
Kwemakumi maviri nemaviri akateedzana makota, T-Mobile yakatungamira iyo indasitiri mune yakazara branded net vatengi kuwedzera
Kwemwedzi mitatu yakafukidza Kubvumbi kusvika Chikumi, T-Mobile yakagadzira $ 17.7 bhiriyoni mumari nemari yemari inorema inosvika $ 110 mamirioni. Iyo kambani yakawana masendi mapfumbamwe pamugove pane yakasanganiswa. Kunze kwekukwirisa AT & T mune huwandu hwevatengi, T-Mobile ndiyo hombe 5G mupi muUS muvanhu vanopfuura mamirioni 250 vanhu vakafukidzwa pamamirioni 1,3 emamirimita (7,500 maguta nemataundi). Izvi zvinoreva maererano nekuvharirwa kwenzvimbo, T-Mobile & apos; s 5G inoratidzira gumbeze kakapetwa kaviri iyo iyo AT & T & apos; s 5G inovhara uye inopfuura kure Verizon & apos; s 5G kufukidzwa. Izvi zvinodaro nekuti T-Mobile & apos; s 600MHz yakaderera-bhendi spectrum inofamba ichienda kure uye inopinda zvivakwa zvirinani kupfuura Verizon & apos; s mmWave spectrum. Iyi yekupedzisira airwaves inounza nekukurumidza 5G kumhanya kupfuura yakaderera-bhendi asi usafambe kusvika kure. T-Mobile inoronga kushandisa mubatanidzwa weepasi-bhendi masystem, iyo 2.5GHz yepakati-bhendi airwaves iyo yakatora pamusoro kubva kuSprint, uye yakakwira-bhendi mmWave masaini ekupa iyo inokurumidza 5G network muAmerica. Vamwe vaongorori vanoona zvakare mutakuri ichipa nyika kukurumidza kudhawunirodha data re5G sezvo tekinoroji inokura.
Iye zvino T-Mobile CEO Mike Sievert kuruboshwe naJohn Legere kurudyi
Iko T-Mobile-Sprint kubatanidzwa kwakavharwa panguva yekota uye 10% yeSprint & apos; s postpaid traffic yakatoendeswa kune iyo T-Mobile network. Iyi yaive T-Mobile & apos; s yekutanga kalendari kota kubvira Q2 ya2012 pasina John Legere saMukuru. Mutungamiri akadzika pasi mushure mekubatana neSprint kuvharwa uye akatsiviwa neangu murume-wenguva refu ruoko rwerudyi murume Mike Sievert. Achitaura nezvaSievert, mukuru wazvino T-Mobile akati, 'Kupfuura AT & T kuita # 2 raive danho rakakura rekutanga Q2, asi aingova mavambo chete! Muchikamu chedu chekutanga sekambani yakabatana, T-Mobile yakatungamira iyo indasitiri mune yakazara yakashambadzirwa mutengi inowedzera - kunyangwe munzvimbo yakaoma - uye hapana mubvunzo kuti isu tiri Kambani inotungamira yekukura mune isina waya. Iye zvino tava kuisa zvitarisiko zvedu pa # 1 - musarudzo yevatengi nemoyo yevatengi - uye tichasvika nekuita CHETE izvo izvo Un-carrier anogona kuita: kupa vatengi netiweki yepamberi ye5G uye kukosha kwakanyanya vachiri kuenderera ita matanho makuru anogadzirisa marwadzo evatengi uye kukanganisa ino indasitiri. Ndiri kufara nezviri kuuya mune ino nyowani T-Mobile nguva - isu tiri kutotanga! '
Kudzoka muna Nyamavhuvhu 2015, T-Mobile yakazokwira ichibva kunze kwedura kupfuura Sprint yenzvimbo yechitatu-nzvimbo muU.S. Uye T-Mobile inoenderera ichifamba kubva pasimba-kuenda-kusimba; iyo chete yakaziviswa kota yechipiri yaive makumi maviri nemaviri akateedzana kota yaive neT-Mobile inotungamira nzira mune yakazara yakashambadzirwa mambure vatengi kuwedzera. Izvi zvinoreva kuti pamusoro pemakore mashanu nehafu apfuura, T-Mobile yakatungamira iyo US indasitiri isina waya muchikamu ichi.
Mushure mekutanga yekutanga nyika yose 5G network muU.S., T-Mobile yakanangana nekupa yakanakisa 5G mushandisi ruzivo kune vatengi vayo. Sekureva kweOver Signal, vatengi veT-Mobile vanokwanisa kuwana chiratidzo che5G kaviri zvakapetwa sevanyori veAT & T, uye ka56 kazhinji kazhinji sevatengi veVerizon. Chirevo chinobva kuna Ookla chinotaura kuti T-Mobile ine 5G kufukidzwa mune kana mana nhamba yemaguta akafukidzwa neAT & T neVerizon zvakabatanidzwa. Uye T-Mobile inotaura kuti vatengi vacho mutambo mutambo we5G-unokwanisa kunakidzwa nekukasira kurodha pasi uye kurodha kumhanya kupfuura vatengi veVerizon.
T-Mobile & apos; s masheya akarova iyo-yenguva-refu yakakwira mushure mekuzivisa kwemihoro kwaitwa. Mukushambadzira kwemaawa masheya akange achichinja maoko angangoita madhora zana nemakumi mana nemana, zvichikwira pamusoro pe5% kubva pekuvhara kwekutengesa kwese.
tmobile imwe kuwedzera 7 pro
flir one vs tsvaga xr
Maitiro ekufananidza akawanda maspika maspika uye gadzira iyo ad-hoc kurira system
Deal: Zvakanakisisa Kutenga zvinopa zvakakosha kuderedzwa pamhando dzakasiyana dzeApple Watch Series 2
Galaxy Note 8 zvikamu muFrance zvinotanga kuwana Oreo. Kugadziridza kwepasirese munguva pfupi?
Fitbit & apos; s Black Friday inobata paVersa 2 smartwatch yatovepo
Rova iyo Nhema Chishanu kumhanya izvozvi neaya maviri mhondi Galaxy Note 8 eBay madhiri
Motorola inoburitsa charger yemotokari yeTurboPower yeDROID Turbo uye nekukurumidza Charge 2.0 zvishandiso